Snapdrop, "AirDrop" nyowani yatinogona kushandisa kubva kubhurawuza | Linux Vakapindwa muropa
Snapdrop, nyowani "AirDrop" yebrowser iyo, saSharedrop, haina kunaka seyaApple
Kunyangwe ini ndichipedza yakawanda yenguva yangu pamakomputa eLinux, haisi iyo chete yekushandisa sisitimu yandinoshandisa. Muchokwadi, kune mobiles uye mapiritsi ini ndinofarira Apple, asi ini ndinoziva kwazvo nezvezvinorambidzwa. Iyo Cupertino kambani inoita zvinhu zvakawanda zvakanaka kwazvo, uye imwe yacho ndeye yayo AirDrop, sisitimu yekugovana mafaera nekukurumidza kana isu takabatana kune imwechete network. Ndizvo chaizvo zvaunoda kuita snapdrop, asi nemisiyano.
AirDrop ndeimwe yeaya akanaka softwares ayo Apple anokura uye izvo zvinongobvumidza iyo kuti ishandiswe pamidziyo yavo. Yekumhanyisa kumhanya yakanyanya kwazvo, ndosaka ndakawedzera chikamu cheiyo mumusoro wenyaya. Uyezve, isu tine software senge Warpector, Kubva kuLinux Mint, asi inogona chete kushandiswa pakati peLinux zvishandiso. Kana, seni, iwe zvakare uchishandisa Windows, macOS, Android uye iOS / iPadOS, chishandiso ichi hachikoshe. Hongu Snapdrop yakakosha, nekuti zvese zvaunoda kuenda peji ino yewebhu pazvinhu zvese zviri zviviri, tinya pamushandisi inoonekwa uye ndikutumire iyo faira, chero bedzi isu tiri paiyo imwecheteyo network yeWiFi.
Snapdrop inoita kunge inokurumidza kupfuura ShareDrop
Muedzo wangu wega, ini ndatumira vhidhiyo ye160mb kune yangu laptop ine Manjaro uye ichave yatora inenge miniti. Ipapo ini ndakaedza kuita zvakafanana mu ShareDrop uye zvinoratidza kuti sarudzo yechinyakare inononoka, saka kana tikasarudza imwe yekushandisa mubrowser, ndinofunga isu tinofanirwa kunamatira neSpapdrop.
Uye heino maonero angu ega: Ndine urombo, asi Ini handikwanise kuvimba nesarudzo yakadai kutumira mafaira akakura. Ini handikwanise nekuti, pakumhanya kwakanyanya kudaro uchienzaniswa neApple's AirDrop, hapana chinovimbisa kuti kutumira 1GB faira kuchamira. Ini ndaikurudzira kune mafaera madiki, asi ndizvo zvandinoshandisa Teregiramu.
Chero zvazvingaitika, Snapdrop ndeye muchinjikwa-chikuva sarudzo, iripo uye iri nekukurumidza kupfuura ShareDrop. Kumirira kuona kuti iyo Kugovana Kuno Kugovera kubva kuGoogle, chingave chinhu chekutarisa kune vazhinji vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Snapdrop, nyowani "AirDrop" yebrowser iyo, saSharedrop, haina kunaka seyaApple
Ndakafarira iyi sarudzo yekugovana mafaera, ini ndagara ndichishandisa samba pakati pemacomputer pane linux, windows haipo kutenderedza pano, asi kugona kuendesa mafaera kubva kunharembozha ne android kuenda kuPC kwaratidzika kunge kukuru sezvo kuri nyore
Kunyangwe ndichifanira kutaura kuti Sharedrop iri pamusoro mupfungwa yekuti ndikasarudza akawanda mafaera ekuchinjisa, ichagadzira zip uye nekutora kamwe chete dzese dzichauya, mu snapdrop unofanirwa kurodha faira rimwe nerimwe, ndinovimba ivo gadzirisa izvi, nekuti zvikasadaro iko kutambudzwa. Uye chaizvo kubva panguva yausingakwanise kugovana dhairekita… ndinofunga ndichaenderera mberi nesamba.
Linux 5.10 LTS iri pano, inounza nhau dzakakosha uye kugadzirisa kugadzirisa kwave kuwanikwa